Dahab lagu qiimeeyay 1 milyan oo Doolar oo lagu qabtay garoon ku yaalla Nairobi
Nin u dhashay dalka Tanzaniya ayaa lagu xiray dalka Kenya ka hor inta uusan korin diyaarad ku sii jeeday magaalada Dubai.
Read more about Dahab lagu qiimeeyay 1 milyan oo Doolar oo lagu qabtay garoon ku yaalla Nairobi
R/wasaare Xasan Cali khayre Oo Magacaabay Madaxa Unugga Isku Xirka Deeqaha
R/wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa maanta magacaabay Unugga Isku Xirka Deeqaha ee dowladda Soomaaliya , kaas oo ka shaqeyn doona arrimaha la xiriira Deeqaha.
Xilkan ayaa waxaa loo magacaabay Mudane Maxumed Xuseen Axmed oo ah khabiir in ka Badan 10 sano ka soo shaqeeyay Arimaha Gar-gaarka, isagoona la soo shaqeeyay inta badan Hay’adaha ka shaqeeya Arrimaha Bani’aadanimada sida ku cad CV-giisa oo aan Noqol kamid ah helnay.
Read more about R/wasaare Xasan Cali khayre Oo Magacaabay Madaxa Unugga Isku Xirka Deeqaha
Garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho waxaa goor dhawayd ka duushay diyaaradii siday Alaha unaxariisto meedkii Nabadoon Axmed Diiriye oo kamid ahaa Nabadoonada Caanka ka ahaa koonfurta soomaaliya, kaas oo maanta meedkiisa loo qaaday Magaalada Cadaado.
Diyaaradii siday meedka Nabadoonka ayaa waxaa horay usii raacay wafdi uu hogaaminayay Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf.
Nabadoonka ayaa maalin kahor waxa uu ku geeriyooday magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya .
Read more about (Dhagayso) Meedka Nabadoon Axmed diiriye Oo looqaaday Magaalada Cadaado iyo Madaxda Dowlada Soomaaliya Oo ka qaybgashay Salaadii Janaasada
Dhimashadii dagaalyahanadii Ruushka ee ku Suuriya 7 February ayaa waxa uu dibadda soo dhigay koox calooshood u shaqaystayaal ah oo qarsoon.
Read more about Calooshood u shaqaystayaasha Ruushka ee ku dhammaanaya Suuriya
Wasaaradda Warfaafinta dowladda Puntland ayaa galabta xusaysa maalinta caalamiga ahh ee Afka-hooyo oo sannad walba ku beegan 21 febraayo, taasoo ah maalin ku weyn shacuubta Dunida.
Warsaxaafadeed kasoo baxay wasiirka wasiirka warfaafinta Puntland, Cabdi Xirsi Cali, oo nuqulkiisa uu soo gaaray warsidaha Puntlandi ayaa lagu sheegay inay dowladda Puntland galabta maamuus qaran u sameynayso ahmiyada ay maalintaan leedahay.
Wasaaradda warfaafinta ayaa ku casuumtay warbaahinta madax bannaan iyo warbahainta dowladda inay kasoo qeyb galaan xaflada lagu xusayo maalinta Afk-hooyo.
Read more about Wasaaradda warfaafinta Puntland oo ka hadashay xuska maalinta Afka hooyo iyo dhaqanka.
Maamulka Galmudug ayaa maanta ku dhawaaqay dagaal lagu qaadao kooxda Argagixisada ah ee Al-shabaab ee ku sugan deegaanada ay galmudug ka taliso.
Ciidamada maamulka galmudug ayaa heegan buuxa lagaliyay ,waxaana lafilayaa in maalmaha soo socda howl galkaasi labilaabi doono.
Madaxa Xukuumadda Maamulka Galmudug Sheekh Maxamed Cali Xasan Shaakir ayaa maanta hadalkan ka sheegay tababar uu u soo xiray Ciidamo katirsan maamulka galmudug oo mudo dhowr bilood ah halkaasi uu tababar uga socday.
Halkan kadhagayso .
Read more about Dhagayso:- Galmudug Oo qaadaysa Howlgal ka dhan ah Al-shabaab
Madaxwaynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa saxiixay amar lagu mamnuucayo isticmaaladda aaladda gacanta ka gaysta in qoryaha ay si daraandoori ah ay u dhacaan .
Read more about Doodda ku saabsan xakamaynta hubka Mareykanka oo wali socota
Ma-Gafe Mise Safaarad, Safiirada Soomaliyeed ee Pakistan khadiija Al makhsuumi
Safaarada dani kaa soo gashay waa habaarka ugu badan ee dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan Pakistan isku habaaraan”.
Waxaa ku nool dalka Pakistan Soomali ku dhaw 1200 oo qof, oo iskugu jira qoysas iyo Arday iyo dhawr qof oo ganacsato ah, Ardayda wadankan ku dhaqan waxay tiradoodu u dhaxaysaa 800 ilaa 1000 arday, oo intooda badan dhigta jaamacadaha dawliga ah iyo kuwa maxaliga ah ba, tirade ardaydu waa xiligii ay ugu hooseeyeen laga soo bilaabo horaantii 1970kii ilaa maanta.
Read more about Ma-Gafe Mise Safaarad, Safiirada Soomaliyeed ee Pakistan khadiija Al makhsuumi
Nikki Haley: Diyaar ayaan u nahay in aan gacan ka gaysano nabadda bariga dhexe
Danjiraha dowladda Mareykanka u fadhida Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in xukuumadda Washinton ay diyaar u tahay in ay gacan ka gaysato wadaxaajoodka nabadeed ee Falastiiniyiinta, balse aysan mareykanka ka daba carari doonin Falastiiniyiinta.
Read more about Nikki Haley: Diyaar ayaan u nahay in aan gacan ka gaysano nabadda bariga dhexe
Kulan ay K/ Waqooyi iyo Maraykanka yeelan lahaayeen oo la baajiyay
Aqalka cad ee Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday in wakiilo ka socday Kuuriyada Waqooyi ay isaga baxeen kulan ay al lahaayeen madaxwayna ku xigeenak Mareykanka Mike Pence,.
Read more about Kulan ay K/ Waqooyi iyo Maraykanka yeelan lahaayeen oo la baajiyay